media | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
မြန်မာပြည် ပြောင်းလဲလာပီ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဝန်ကြီးတွေက လူထုနဲ့ အင်တာနက်က ထိတွေ့နေပီ စသဖြင့် အားရဝမ်းသာ ဖြစ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့တိုင်း တုံးသကွယ်လို့ ဆိုချင်တာပါပဲ။ မောင်ရင်တို့ ဆိုက်ဝါးဆိုတာ သိလားလို့လဲမေးလိုက်မိပါတယ်။ တပ်မတော် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးဆိုပီး ဌာနကြီးဖွင့်ပီး လည်ပတ်ခဲ့တာ နှစ် ၆ဝ လောက်ဆိုတော့ လူအများမေ့ကြပီပေါ့။ တကယ်က နိုင်ငံရေးနဲ့ သံယောဇဉ်မပြတ်တဲ့ တပ်တွေတိုင်းမှာ ဆိုက်ဝါးက ရှိရပါတယ်။ ဗမာစစ်တပ်ထက် စောတဲ့ ထိုင်းစစ်တပ်ဟာ ဘုရင်စနစ် ပြောင်းလဲရေးမှာ အဓိကခန်းက ပါခဲ့ပီးနောက် ဘုရင်စနစ် အသွင်ပြောင်းပီး ထိုင်းအထက်လွှာရဲ့ အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းက ပါခဲ့တာမျိုး ဗမာစစ်တပ်ဟာလဲ လွတ်လပ်ရေး အရယူပီး ဆိုရှယ်လစ် စနစ်ချီတက်ချိန်မှာ အာဏာရလူတန်းစားရဲ့ အဓိက ယန္တရားကြီး ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။ Advertisements
စာမွေ့သူတဦး ကျေးဇူးပြုသည် .. လူထုခေါင်းကြီးနှင့် ဝေဘန်ချက်များ ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုဉ်းပြီ ဒီမိုကရေစီ၏ အခြေခံသည် ပြည်သူ့ဆန္ဒမဲဖြင့်တက်သည့် အစိုးရဆိုပါလျှင်လည်း မဲဆန္ဒရှင်တို့၏ အဝေဖန်ကိုခံကြရသည်။ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာဖြင့်လခပေး၍ ထားရသောအရာထမ်းအမှုထမ်းများအားလည်း အခွန်ထမ်းပြည်သူတို့က လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ပြောဆိုရေးညွှန်ပြနိုင်ပေသည်။ယခုသော်ကား”အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျား” ဟူ၍ထောက်ခံမှုကလွဲ၍ ဘာဝေဖန်ချက်ကိုမှ လက်မခံဟုဆိုပါလျှင် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ ဖက်ဆစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟူ၍ ကြေညာရန်ရှိတော့သည်။ လူထုသတင်းစာခေါင်းကြီး။၂၃-၈-၁၉၅၄ ။မှ ဒီမိုကရေစီ ဥပဒေများ ဒီမိုကရေစီအမည်ခံတိုင်းပြည်များ၌ ရေးဆွဲထားသော ဥပဒေများသည် ကြွယ်ဝသူများအဖို့ချည်းဖြစ်၏။ကြွယ်ဝသူဖြစ်ခဲ့လျှင် တရားရုံးတခုတွင် ရှုံးသော်လည်း အထက်ရုံးသို့တက်၍ တဆင့်မှတဆင့် အမြင့်ဆုံးသောရုံးသို့တက်နိုင်၏။ ထိုကဲ့သို့တက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့် အနိုင်ရသောအမှုသည်များလည်း မြောက်များစွာရှိ၏။လူမွဲဖြစ်ခဲ့လျှင် တရုံးတွင်ရှုံးကာမျှနှင့် တခါတည်းရှုံးရချေတော့မည်။ သို့ဖြစ်၍ ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်များတွင် ဥပဒေများသည် ကြွယ်ဝသူများအတွကိဖြစ်နေ၍ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်စေနိုင်ရန် တမင်တကာရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်ဟူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကဆိုလိုက်ရပေသည်။ အကြောင်းမူကား ၎င်းဥပဒေများမှာ လူဆင်းရဲများရေးဆွဲနိုင်ခွင့် ရှိကြသည်မဟုတ်ဘဲ ကြွယ်ဝသူများအတွက် ကိုယ်စားလှယ်ပြုသောလူများက […]
Filed under: guest column, history, media, politics	| 1 Comment
New Media for new Burma
An op/ed of the late essayist Maung Wa (an I.C.S in colonial administarion) reprint from the World of Book (Gandha-lawka), 1939, on development of vernecular press in Burma
Filed under: history, media, politics	| LeaveaComment
In 1958,aprison story of U Hla was planned to film in Rangoon by Thu-kha. Ah-mya, the leading character in this gay-and-son-lover story, would be shot withaprime movie star from pre-war Burma, May Shin, in her 40s. But the plan was aborted and only stills from the project were left to record […]
Filed under: arts and culture, Burmese women, literature, media	| LeaveaComment